Xirmooyinka beddelka gaaska-ilaa-propane ee ONYX waxay oggolaadaan inay yareeyaan kharashaadka, qiiqa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xirmooyinka beddelka gaaska-ilaa-propane ee ONYX waxay oggolaadaan inay yareeyaan kharashaadka, qiiqa
Hal-abuuraha tignoolajiyada tamarta nadiifka ah ee ONYX Systems ayaa shaaca ka qaaday helitaanka xirmooyinka beddelka qiiqa qiiqa eber ee baabuurta utility John Deere Gator, ka faa'iidaysiga hawl-wadeennada qiimaha shidaalku hooseeyo, qiiqa aadka u hooseeya, iyo korodhka wax soo saarka.
Xirmooyinka EPA & CARB ee shahaadiga ah waxay ku habboon yihiin TX iyo HPX John Deere Gators oo la soo saaray 2015 ka dib waxayna diyaar u yihiin in lagu rakibo ganacsatada John Deere ee ka qaybqaata.
"Qalabka beddelka propane ee ONYX iyo nidaamyada mishiinnada propane waxay siiyeen boqollaal dhul-beereed, kulliyado, jardiinooyin, iyo degmooyinka xal la isku halleyn karo oo nadiif ah oo loogu talagalay mashiinnada ganacsiga taas oo yaraynaysa kharashaadka hawlgalka qiyaastii $ 1.00 saacaddii hawlgalka mashiinka," ayuu yiri Jeremy Hahne, VP of Sales ee ONYX.
"Hay'adahan la midka ah ayaa hadda u rogi kara maraakiibtooda Gator mid deegaan ahaan u wanaagsan, qiimo jaban, iyo shidaal la isku halayn karo."
Qalabka ayaa diyaar u ah in lagu rakibo iyada oo loo marayo iibiyaasha ka qaybqaata.